Shenzhen TryAce Technology Co., Ltd ndeimwe achitungamirira vagadziri kusanganisa R & D, kugadzirwa uye rokutengesa ose hunyambiri nokuputsanya cam that, 4k nokuputsanya cam that, WiFi nokuputsanya cam that, duku nokuputsanya cam that, akavanda nokuputsanya cam that, girazi kamera ....
We chamakamisa kutaridza yepamusoro kudzora ezvinhu, Panguva ino, tine vanopfuura 10 QC vashandi, uye zvakasimba mukwanisi zvigadzirwa ISO9001.Our kunge vanokudzwa zvitupa CE, FCC, CCC, ROHS, uye IP68. Tine makore 15 ekisipoti ruzivo, ichipa rubatsiro kune kuwedzera OEM uye ODM zvirevo zviri America, Europe, North America uye kuSoutheast Asia. Uye zvokutengeserana chikwata chedu agadzirira kukushumirai.
"Kuti zvakajairika sawanikwa" chinhu managerial pfungwa tikapfuurira ubudise mberi. Panguva imwe cheteyo, ndiko chinangwa ose TryAce munhu unovadzinga. Tinotenda: Mune nyasha kwezvakatipoteredza kuumba inowirirana munzanga uye vakachengeteka China uye nokundikurudzira isu kubva dzakawanda TryAce S vakavimbika vatengi uye ose vanofamba upenyu, isu, sezvo yakachena nemumiriri, zvirokwazvo zvizere guru, ano, tarenda uye kutarisirwa tinofanira vakashinga muna kuongorora uye innovating zvigadzirwa zvitsva, zvichiita zvakawanda mipiro nokuda nani mangwana wenyika yedu uye munyika motokari makachengeteka.